Imibuzo evame ukubuzwa - iShang Hai Tongke Flow Technology Co., Ltd.
1. Yini imbobo yokuthunyelwa？
Ngokuya kokulethwa kwesicelo sekhasimende ethekwini eliqokiwe, uma kungekho sicelo esikhethekile, itheku lokulayisha liyichweba laseShanghai.
2. Lithini igama lokukhokha？
U-30% okhokhelwa kusengaphambili ngu-T / T, 70% T / T ngaphambi kokuthunyelwa, noma isikweletu se-L / C lapho usubona.
3. Luthini usuku lokulethwa?
Ukulethwa kwezinsuku ezingama-30- 60 kusuka efektri ngemuva kokuthola idiphozi ngokuya ngohlobo oluhlukile lwamaphampu nokutholakala.
4. yinde kangakanani isikhathi sewaranti?
Izinyanga eziyi-18 ngemuva kokulethwa komkhiqizo kusuka efektri noma ezinyangeni eziyi-12 ngemuva kokuqala ukusetshenziswa kwemishini.
5. Kungakhathaliseki ukuhlinzeka emva-sales yesondlo?
Sine onjiniyela abaqeqeshiwe ukunikeza ukufakwa isiqondiso futhi emva-sales services yesondlo.
6. Kungabe ukuhlinzeka ngokuhlolwa komkhiqizo?
Singahlinzeka ngezinhlobo ezahlukahlukene zokuhlolwa nokuhlolwa okuvela eceleni ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
7. Ingabe umkhiqizo ungenziwa ngezifiso?
Singakwazi ukwenza ngezifiso imikhiqizo ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
8. Ngabe uyawanikeza amasampuli?
Njengoba imikhiqizo yethu iyimikhiqizo eyenziwe ngezifiso, ngokuvamile asihlinzeki ngamasampuli.
9. Yiziphi izindinganiso zamaphampu omlilo?
Amaphampu omlilo ngokusho kwamazinga we-NFPA20.
10. Ngabe lipompo lakho lamakhemikhali lihlangabezana nani?
Ngokuya nge-ANSI / API610.
11. Ingabe uyimboni noma inkampani yokuhweba?
Singumkhiqizi, sinefektri yethu, sidlulise isitifiketi se-ISO.
12. Imiphi imikhiqizo yakho ongayifakela ifayili?
Singanikela ngezinhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo efaka isicelo sokudluliswa kwamanzi, uhlelo lokushisa nokupholisa, inqubo yeMboni, imboni yamakhemikhali kaPetroleum, uhlelo lokwakha, ukwelashwa kwamanzi oLwandle, insizakalo Yezolimo, uhlelo lokulwa noMlilo, ukwelashwa kweNdle.
13. Yiluphi ulwazi oluyisisekelo okufanele lunikezwe ukuphenywa okujwayelekile?
Amandla, iNhloko, ulwazi olumaphakathi, izidingo zempahla, ukuqhutshwa kwezimoto noma idizili, imvamisa yezimoto. Uma impompo ye-turbine mpo, sidinga ukwazi ubude besisekelo esingaphansi nokukhishwa kungaphansi kwesisekelo noma ngaphezulu kwesisekelo, uma iphampu yokuzibamba, kudingeka sazi ukuncela kwe-Head ect.
14. Ungancoma ukuthi imiphi imikhiqizo yakho efanelekile ukuthi siyisebenzise?
Sinabasebenzi bezobuchwepheshe abaqeqeshiwe, ngokwemininingwane oyinikezayo, kuhlanganiswe nesimo sangempela, sokuthi uncoma ukuthi ilungele imikhiqizo yakho.
15. Yiziphi izinhlobo zamaphampu onazo?
16. Yimuphi umbhalo ongawuhlinzeka ngesilinganiso?
Sivame ukunikela ngohlu lokucaphuna, ijika nedatha yedatha, umdwebo, neminye imibhalo yokuhlola oyidingayo. Uma udinga ukuhlolwa kwengxenye engamashumi amathathu kuzolunga, kepha kufanele ukhokhe imali yeqembu engamashumi amathathu.